isitifiketi Environmental wenziwa ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwanoma yimuphi umsebenzi maqondana imvelo. Kuthathwa umfutho sina ngokuya okukhipha kanye nokwethulwa ubuchwepheshe ukuhlinzeka uyamethemba ukuphepha kwemikhiqizo nezinqubo impilo, ukuphila, impahla kanye nombuthano wawo uhlalwe ngabantu.
kwemvelo isitifiketi uhlelo kuhlanganisa lezi zinhlobo ezilandelayo izinto: izakhi kwemvelo (izingxenye nezisetshenziswa); imithombo ukungcola (izinqubo zokukhiqiza, ukukhiqiza); imikhiqizo emkhakheni nokuvikelwa kwemvelo; Imininingwane imithombo (yolwazi, tinkhulumo, izinhlelo). Imbangela yalokhu lapho isitifiketi kwemvelo wenziwa - ukukhulisa ukuqhudelana ukuthola uphawu olufanele. Ngaphezu kwalokho, amaqembu athile umkhiqizo ke kuyimfanelo ukuthi uqinisekisa ikhono isimiso ukuncintisana namanye abakhiqizi. Environmental isitifiketi liyadingeka yezinhlangano ukuthi sebenzisa ungcolisa ezizungezile isikhala ubuchwepheshe kanye nomkhakha wezokuvikela izimboni.
Imisebenzi esemqoka ixazululwe by ke, yilezi: ukuhlonishwa kwamalungelo abantu imikhiqizo ephephile, ukuthuthukisa ukukhetha afanele izimpahla, ukuvikelwa abakhiqizi ukukhwabanisa, ukwenza ngcono ikhwalithi yokubandula ngezinto ezithengisiwe ezimweni zokuncintisana.
isitifiketi Environmental isetshenziswa ukufeza umgomo othile. Ukhuthaza ukuthuthukiswa nokwenziwa ngcono ukukhiqiza. Ngenxa yalokhu inqubo waqinisekisa kwemigomo emvelweni ubumsulwa izinga. Ngaphezu kwalokho, isitifiketi kwemvelo ithuthukisa udumo yenkampani. Le nqubo ibizwa wawubekela imithetho eqinile.
Certification akuzona izimpahla kuphela abathengi, kodwa futhi uhlelo ukuphathwa kwemvelo ngendlela eyiyo inhlangano (SPP). Kuze kube yimanje, sisungule uhlelo lwezimiso okufanele zifinyelelwe inkampani ezicwaningiwe. Seu ngokwayo ubhekwa ingxenye yesimiso ukuphathwa kwenkampani, abangababi bemisebenzi yaso eyinhloko ukuphatha nendawo ezungezile. Zonke amazinga kule ndawo bamunye uchungechunge ISO 14000.
Phakathi nenqubo isitifiketi izinto ezilandelayo ihlolwe: imisebenzi Ukuphathwa nokuvikelwa kwemvelo, nokugcinwa yayo kanye ngcono; sokujuba zobuchwepheshe, okuyinto abangela ukungcola; ukuhambisana nezidingo kwemvelo imikhiqizo yayo marketing, design, ukukhiqiza, ukusetshenziswa kanye nokulahlwa.
Ukuze uthole Ecolabel ku umkhiqizo, umenzi kumele bathumele eziningi imibhalo. Ikakhulu, i-ukukhiqizwa, ukuhlolwa yezifiso ipasipoti avelelwe nezindlu zangasese-epidemiological ukubhekwa, amasampula imikhiqizo. Inqubo kubandakanya ukufaka empilweni, ukuze asayine inkontilaka, yokuqinisekisa, ukuhlolwa of msulwa emvelweni, ukubhaliswa kanye Ukukhishwa isitifiketi. Kungase kube okwesikhashana uma noma ikuphi ukungafani bachazwa ngesikhathi sokuhlolwa. Uma kwesokunxele uncorrected, iziqondiso noma Ukuwohloka umkhiqizo yokukhiqiza ubuchwepheshe isitifiketi sokwesulwa kungenzeka.
Kanjani ukuze kuthuthukiswe i-Windows 8: izixazululo Evamile